မောင်မျိုး မေမေ့ မိန့်မှာမှု | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
မောင်မျိုး မေမေ့ မိန့်မှာမှု	Posted by mm thinker on January 27, 2008
Posted in: Joke.	Tagged: Joke.	Leaveacomment
‘မောင်မျိုး မင်းမမှားမီ မေမေမိန့်မှာမယ်‘ မောင်မျိုး… မမူးမီ၊ မမေ့မီ… မှတ်မှတ်… မင်းမိန်းမ မော်မော် မြိုးမြိုးမြက်မြက်များ မြင်မှမြင်၊ များမှမြတ်မှမြင်။ မော်မော်မှာ မင်း မောမှာမို့၊ မှားမှာမို့ မမေးမမြန်း၊ မမေးမမြူ။ မင်းမှတ်၊ မောင်မျိုး မှတ်… မေမေ မှာမယ်၊ မိန့်မြွက်မယ်။ မော်မော့်မှာ မောမှမော… မေမြို့မှာ မျောက်များ၊ မြင်းများမွေးမြူ… မြိတ်မှ မဲမဲမှောင်မှောင် မှို၊ မြက်၊ မက်မန်းမျိုးများမှာ… မြောင်းမြမှ မျှစ်၊ မျှော့၊ မြွေ များမှာ… မုန့်မှုန့်မန်… မီးမြှိုက်၊ မီးမြှင်း… မျောက်များ၊ မြင်းများ၊ မျောက်မွှေး၊ မျောက်မြီး၊ မြင်းမွှေး၊ မြင်းမြီးများ၊ မက်မန်း၊ မှို၊ မျှစ်၊ မျှော့၊ မြွေများ မိုးမမိမီ မြစ်မှ မြန်မြန်မျှော။ မင်းမိန်းမမော့်မော့်မှာ မြန်မှမြန်… မြင်မှမြင်။
← ရှုရှုးပန်းခွက် ကိစ္စ	ယာယီကဗျာဆရာ၏ ထာဝရပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ (ပထမပိုင်း) →	0 comments on “မောင်မျိုး မေမေ့ မိန့်မှာမှု”
မောင်မျိုး on January 27, 2008 at 8:32 am said:
Reply	သဇင်ဏီ on January 27, 2008 at 8:44 am said:
အယ်..မောင်မျိုးမေမေ့မိန့်မာမူ.. မ တွေချည်းပဲပါတဲ့ပို့စ်ပို့နော်.. မိုက်တော့မိုက်တယ်..🙂 သယ်ရင်းမောင်မျိုးနာမည်ကြီးနဲ့တူနေတော့ တညိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်. ဖတ်ပီးတော့
Reply	danialog on February 1, 2008 at 12:12 am said: